खेलकुद – aishworya
लिस्नुकप : ट्राइब्रेकरमा भैरव एफसी विजयी
६ साउन, बुटवल । भैरव एफसी नवलपरासी रुपन्देहीको कोटिहवामा जारी १८ औं लिस्नुकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । पशुपति माविको मैदानमा आइतबार भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा भैरवले रुपन्देहीको झरना स्पोर्टस् क्लब कुन्जलापुरलाई ट्राइब्रेकरमा ४-१ ले पाखा लगाएको हो । निर्धारित र अतिरिक्त समयमा दुबै टिमले गोल गर्न नसकेपछि हारजितको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट
३१ असार, काठमाडौं । भारतीय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले एकदिवसीय क्रिकेटमा दश हजार रन पुरा गरेका छन् । धोनी जब लर्ड्समा ब्याटिङ गर्न उत्रिए, वनडे करियरमा १० हजार रन पुर्‍याउन उनलाई ३३ रन चाहिएको थियो । २३२ रनको लक्ष्य पछ्याएको भारत भलै ८६ रनले हार्‍यो, धोनीले ४३ औं ओभरमा सिंगल लिएर यो उपलब्धी
विश्वकप फाइनल : ला लिगा भर्सेस लिग वान !
२९ असार, काठमाडौं । विश्वकप फुटबलमा सहभागी खेलाडी विभिन्न देशमा लिग फुटबलमा आबद्ध छन् । क्लब फुटबल पछ्याउने फुटबल समर्थकले खेलाडीको क्लबका आधारमा पनि समर्थन गर्ने गर्दछन् । रसिया विश्वकपमा सहभागी हुने खेलाडीमा सबैभन्दा धेरै इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीबाट थिए । सिटीका १६ जना खेलाडी रहेको विश्वकप फाइनलसम्म भने एक खेलाडी मात्रै पुगेका छन् ।
रियल मेड्रिडबाट इटालीको क्लब युभेन्टसमा भित्रिएका सुपरस्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोको नयाँ जर्सीबारे मानिसहरुमा भारी उत्साह छ । युभेन्टसले बुधबार रोनाल्डोको जर्सी नम्बर–७ आफ्नो अनलाइन सपिङ साइटमा राखेको केही बेरपछि नै साइट क्र्यास भएको छ । ३३ वर्षका यी स्ट्राइकरले नौ वर्ष रियल म्याड्रिडमा बिताएपछि युभेन्टसमा पनि नम्बर सातलाई आफूसँगै राखे । उनलाई युभेन्टसले ८.८ करोड
अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० मा फिन्चको नयाँ उचाई
२५ असार, काठमाडौं । अस्टे्रलियाका ओपनर ब्याट्सम्यान आरोन फिन्चले टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नयाँ कीर्तिमान बनाएका छन् । उनी टी-२० ब्याट्सम्यानको श्रेणीमा नौ सय अंकसहित शीर्ष स्थानमा पुगेका हुन् । जुन कीर्तिमानी अंक हो । पाकिस्तान र जिम्बावेसँगको त्रिकोणीय सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका फिन्चले जिम्बावेविरुद्ध ७६ बलमा १ सय ७२ रन बनाएका थिए । जुन अन्तर्राष्ट्रिय
रोनाल्डो युभेन्टस जाने तयारीमा, चिनियाँ प्रस्ताव अस्वीकार
रियल म्याड्रिडका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो युभेन्टस जाने तयारीमा गरेका छन्। एक सय मिलियन युरोमा युभेन्टसले उनलाई खरिद गर्ने र उनले त्यहाँ वार्षिक ३० मिलियन युरो कमाउने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताइएका छन्। रोनाल्डोले रियल छोड्ने समाचारसँगै उनलाई म्यानचेस्टर युनाइटेड पनि भित्र्याउने चासो देखाएको छ। यसैबीच एक चिनीयाँ क्लबले उनलाई भित्र्याउन १ सय ७७ मिलियन पाउन्डको प्रस्तावसमेत गरेको
रोनाल्डोको लागि युभेन्टसको १०० मिलियन प्रस्ताव, बेच्ला त रियलले ?
२१ असार, काठमाडौं । रोनाल्डोको लागि इटालिएन सिरी ए च्याम्पियन युभेन्टसले १०० मिलियन यूरो अर्थात ८८ मिलियन पाउण्ड प्रस्ताव गरेको छ । युभेन्टसको प्रस्तावलाई रियलले विचार गरिरहेको जनाइएको छ । गत साता विश्वकपबाट उरुग्वेसँग २–१ पराजय भोग्दै अन्तिम १६ बाट बाहिरिएको पोर्चुगलका यी क्याप्टेन आफ्नो करिअरको उत्तराद्र्धमा छन् । Source : Onlinekhabar Please follow and
६ असार, काठमाडौं । नेपालसँग मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेल खेल्ने बेलायतको चर्चित क्लब मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) को नेतृत्व श्रीलंकाका पूर्वकप्तान माहेला जयवर्द्धनेले गर्ने भएका छन् । एमसीसीले नेपाल र नेदरल्याण्ड्ससँग हुने टी ट्वान्टी क्रिकेटका लागि बु्धबार कप्तान चयन गरेको हो । Source: Onlinekhabar Please follow and like us: